यस्ता छन लाक्पा रेँडु शेर्पाका एघारौँ पटक सगरमाथा चढ्दाका अनुभव, हरेक कुरा सम्भव छ भनेर प्रमाणित — Motivate News
Posted on June 16, 2018 by motivate news
प्रेम प्रसाद नेपाल
काठमाडौँ – सगरमाथा आरोही संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय माउण्टेरिङ गाइडका महासचिव हुन लाक्पा रेँडु शेर्पा । उनले ११ पटक सम्म सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसकेका छन । उनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको माउण्टेरिङ गाइड पनि हुन । उनै शेर्पासंग सगरमाथा चढ्दाका दुःख, संघर्ष र सफलता लगायत सरकारसंग ओरोहिका अपेक्षाहरु के छन भनेर मोटिभेट न्यूजले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सपादित अंश ।
तपाइँ पर्यटन क्षेत्रमा कसरी आकर्षित हुनुभयो ?
मेरो परिवारमा म भन्दा अगाडि यस क्षेत्रमा कोही पनि लागेको थिएन । मेरो बुबा सिकर्मी काम गर्नुहुन्थ्यो । मलाई बुबाको पेसामा खासै रुचि थिएन । सगरमाथा आरोहण गर्न आउने पर्यटकहरु देखेर रमाइलो लाग्थ्यो । म दुई कक्षामा पढ्दा पढ्दै भागेर खुम्बुमा गएँ र विदेशीहरुको साथमा लागेर काम गर्न थालेँ । हाम्रो क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि भइरहने कारणले पनि म सानो उमेर देखि नै यसमा आकर्षित भएको हुँ ।
तपाइँलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त माउण्टेरिङ गाइडको उपाधि प्राप्त गर्न कति समय लाग्यो ? यस्ता दक्ष गाइडहरु नेपालमा कति छन् ? उनीहरुको मुख्य जिम्मेवारी के हुन्छ ?
सुरुको चरणदेखि यो उपाधि पाउने तहसम्म आइपुग्न धेरै लामो तालिमको जरुरत पर्छ । शारिरीक परिश्रम धेरै गर्नुपर्छ । निरन्तर लागि परेको खण्डमा ५ वर्ष भन्दा पनि बढी समय लाग्छ । यसमा आर्थिक पक्षपनि सबल हुनु अनिवार्य छ । काम गरेर आम्दानी गरेको सबै रकम प्रशिक्षण लिँदा नै सकिन्छ । म पनि निकै लामो त्याग, सघर्षबाट नै यो तहमा आएको हो । नेपालमा मैले गरेको भन्दा उच्चस्तरको तालिम छैन । म जस्ता माउण्टेरिङ गाइडमा उच्चतम तालिम हासिल गरेका गाइडहरु जम्मा ५५ जना मात्र छौं । यो स्थानमा आउन सहज छैन । हिमाल आरोहण गर्ने पर्यटक आरोहीहरुको अभिभावक भएर उनीहरुलाई सुरक्षित राख्ने काम नै हामी जस्ता गाइडहरुको मुख्य जिम्मेवारी हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उनीहरुले आरोहण गर्ने आरोहीहरु माथि गरेको ब्यवहारले धेरै नै महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने हुन्छ । छोटकरीमा भन्ने हो भने पर्यटकहरु हिमाल आरोहण गर्न काठमाडौंबाट हिँडेपछि पुनः काठमाडौं आउँदासम्म बीचमा आइपर्ने सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी हामी जस्ता दक्ष गाइडको रहेको हुन्छ ।
सगरमाथा आरोहण गराउने कम्पनीहरुले पर्यटकबाट धेरै रकम उठाउने तर कामगर्ने कामदारहरुलाई उचित पारिश्रमिक नदिने भन्ने गुनासो सुनिन्छ, वास्ताविकता के हो ?
विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउन टे«किङ कम्पनीहरुको ठुलो योगदान रहन्छ । नेपालमा सगरमाथा आरोहण गराउने कम्पनीहरु धेरैवटा छन् । पहिला यस्ता गुनासाहरु धेरै थिए । काम गर्नेलाई कम पारिश्रमिक दिएर श्रम शोषण गर्ने गरिन्थ्यो भने पछिल्लो समयम यस्ता समस्याहरु क्म हुँदै गएका छन् । अबको समय भनेको प्रविधिको हो । यससँग सम्बद्ध रहेका विभिन्न संघ संस्थाहरुले यसका काम गरिरहेका छन् । सगरमाथा भनेको नेपालको शीर हो । नेपालका हिमाल भनेको विश्वको लागि गहना हो । पर्यटन ब्यवसायबाट टिकट बेच्नेदेखि साग बिक्री गर्नेसम्मलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा फाइदा हुन्छ । सारमा भन्ने हो भने यसले समाजका धेरै पक्षको आर्थिक उपार्जनमा सहयोग गर्दछ ।
तपाइँले अहिलेसम्म कति पटक सगरमाथा आरोहण गर्नुभयो ?
मैले नेपाल तिब्बत दुबैबाट गरेर जम्मा १८ चोटी सगरमाथा चढ्ने प्रयास गरेकोमा ११ पटक मात्र सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला राख्न सफल भएँ । अर्थात् ११ पटक सगरमाथा चढें । सगरमाथा आरोहण गर्न धेरै कुराको ब्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ भने स्वास्थ्यले पनि साथ दिनुपर्छ । मौसम अनुकूल नभएमा सगरमाथा आरोहण गर्न सकिन्न । अर्को कुरा सगरमाथा चड्नु भनेको चानचुने होइन । सगरमाथा आरोहण गर्न सबै पक्षको उचित साथ सहयोग र टिमवर्क राम्रो हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
तपाइँ फोटोग्राफी पनि गर्नुहुन्छ ?
मलाइँ फोटोग्राफीमा धेरै नै रुचि छ । म प्रत्येक पटक सगरमाथा आरोहण गर्दा राम्रो क्यामेरा सँगै लाने गर्दछु । मौका मिल्ना साथ सगरमाथाको फोटो खिच्ने गरेको छु । यसले मलाई आत्म सन्तष्टि समेत मिल्छ । साथै सगरमाथा आरोहण गर्ने भनेको शरीरमा बल छ उञ्जेल मात्र हो । आफूले जीवनमा गरेका कामहरु पछिसम्म सम्झना रहने र आप्mना सन्ततिहरुले समेत मैले गरेका कामहरु हेर्न सकुन् भन्ने सोचेर नै म फोटोग्राफीमा आकर्षित भएको हो । सन् २००६ मा सगरमाथा आरोहण गर्दा फिलिपिन्सको एक प्रसिद्ध टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रशारण गरेको देखेपछि मैले सन् २००९ मा फोटोग्राफीको तालिम नै लिएको हो । अहिले मसँग सगरमाथाको ८० घण्टाभन्दा बढीको भिडियो क्लिप रहेको छ । मैले यो काम गरेको थिएँ र पो सबैसामु देखाउने अवसर पाएँ । म यसमा धेरै खुशी छु ।
भूकम्पपछि सगरमाथा लगायत अन्य हिमशिखरहरु आरोहण गर्ने उदेश्यले नेपाल आउने पर्यटकहरुको संख्यामा कमी आएको भन्ने सुनिन्छ नि के यो सत्य हो ?
मैले यस वर्षको आधिकारिक तथ्यांक त हेरेको छैन तापनि विश्वबाट हिमाल र अझ त्यसमा पनि सगरमाथा जस्तो सर्बोच्च शिखर आरोहण गर्ने आउने पर्यटकहरु बढेका छन् जस्तो लाग्छ । भूकम्प गएको वर्ष सुरक्षा जस्ता कुराहरुले केही कमी भएको हो तर त्यसपछि उनीहरु लगातार आइरहेका छन् ।
भूकम्पको समयमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरुले नेपालको हिमशिखरहरु खतरापूर्ण स्थितिमा छन् अझ जोखिम छ, फेरि पनि ठुलो भूकम्प आउन सक्ने सम्भावना छ, भूकम्पकै कारण धेरै आरोहीहरुको मृत्यु भयो, घाइते तथा अंगभंग भएकाहरुको राम्रो उपचार र उद्धार हुन सकेन भनेर लगातार रुपमा नकारात्मक समाचार मात्र प्रशारण गर्ने काम गरेकोले केही समयसम्म नेपाल आउन लालायित विश्वभरका पर्यटकहरु दोधारमा परेको सत्य हो । तर केही समयपछि हाम्रो सरकारले विभिन्न कूटनीतिक माध्यमबाट हाम्रा हिमालहरु सुरक्षित छन् भन्ने सूचना प्रवाह गरेपछि उनीहरु फेरि नेपाल आउनथाले । झन् पछिल्लो सिजनमा त हिमाल र अझ त्यसमा पनि सगरमाथा आरोहण गर्न आउने पर्यटकहरुको संख्यामा धेरै बढोत्तरी भएको छ ।
तपाइँ भूकम्पको समयमा पनि सगरमाथा वेश क्याम्पमा नै हुनुहुन्थ्यो कस्तो अनुभव भयो ?
हाम्रो लगभग ३२ जनाको टोली सगरमाथाको आधार शिविरमा हल्का तालिम गरिरहेको अवस्थामा एक्कासी भुकम्प आएर धेरै ठुलो क्षति गरायो । हामीहरु सबै एकै ठाउँमा घोप्टिएर बसेकाले मानवीय क्षति भने हुन पाएन । मैले सकेसम्म सबैलाई बचाउन सकेँ । हामी ३ मिनेटसम्म पुरै पुरिएका थियौं । पहिरो कम भएपछि हामी विस्तारै बाहिर निस्किएका हौं । छोटकरीमा भन्ने हो भने हामी भाग्यले मात्रै बाँच्न सफल भएका हौं । यसमा धेरै आरोही साथीहरुले ज्यान गुमाए । हाम्रो इतिहासमा यो धेरै ठुलो प्राकृतिक विपत्ति हो । यसबाट हामीलाई धेरै ठुलो नोक्सान पनि भयो । हामीलाई आरोहण गराउने कम्पनीलाई भने करोडौंको नोक्सानभयो ।
तपाईहरुको सरकारसँग के कस्तो अपेक्षा के हो ?
पर्यटनले नेपाल सरकारलाई राजस्वमा धेरै सहयोग पु¥याएको छ । सगरमाथालाई विश्व सामु चिनाएर धेरै भन्दा धेरै पर्यटकहरु नेपाल ल्याउँदा सरकारलाई धेरै कुराको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ । हामी पर्यटकहरुसँगै ज्यान हत्केलामा राखेर सगरमाथा चड्छौं । हामीलाई सगरमाथा आरोहण गरेको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेपछि अहिले प्रमाणपत्र दिने भनेर निर्णय भएको छ, यो राम्रो काम हो । हाम्रो कामको उचित मुल्यांकन गरियोस् । त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण कुरा नेपाल सरकार नियुक्ति गर्ने सम्पर्क अधिकृतहरुमा हामी जस्ता दक्ष र हिमालमै बसेर कामगर्न सक्ने गाइड आरोहीहरुलाई नै गरियोस् । सगरमाथा आरोहण गरेका नेपालीहरुलाई सरकारले केही सहुलियतहरु दिनुपर्छ । स्वास्थ्यो पचार निशुल्क पाउनुपर्छ, जीवन निर्वाह गर्न भत्ताको ब्यवस्था गर्नुपर्छ । मान सम्मान गरेर उनीहरुको स्वाभिमान उच्च राख्न सरकारले विशेष कार्यहरु गर्नुपर्छ जसले गर्दा भविष्यमा पनि अरु शेर्पाहरुले निर्धक्क भएर आरोअण गरी नेपालको शीर उँचो राख्ने काममा निरन्तर योगदान गर्न सकुन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा सञ्चार ग्राम नजिकै रहेको हिम साम्राट स्वर्गीय बाबुछिरी शेर्पाको सालिक चक्रपथ सडक बिस्तार गर्दा त्यहाँबाट अरु स्थानमा सार्न परेमा सुरक्षित किसिमले स्थानान्तरण गर्न हाम्रो माग हो । सरकारले यसबारेमा ध्यान दिन जरुरी छ । यो सालिक सबै नेपालीको गहना हो । हाम्रो सगरमाथा आरोही संघको यसबारेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसो भएको खण्डमा हामीलाई पनि सरकारले केही गर्छ भन्ने विश्वासको भावना पैदा हुन्छ । सगरमाथा आरोही संघ, हिमालयन उद्धार संघ, नेपाल
पर्वतारोहण संघ, नेपाल पर्यटन बोर्ड, टान लगायतका संस्थाहरुले पनि यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ रहेको छ ।
सगरमाथा आरोहण गर्ने धेरै शेर्पाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् यसलाई रोक्न के गर्नुपर्ला ?
हालसम्म २१ चोटि सगरमाथा आरोहण गर्ने आप्पा शेर्पा अमेरिकामा स्थायी बसोबास गररहेका छन् भने अन्य धेरै आरोहीहरु पनि नेपाल छाड्न बाध्य छन् । यो सगरमाथा चढ्ने काम भनेको ज्यादै नै जोखिमपूर्ण र भौतिक रुपमा धेरै दुःखको काम हो । यो काम भनेको आफ्नो शरीरमा बल भएसम्म मात्र गर्ने हो । भोलिको रिटायर्ड जीवन के गर्ने भन्ने नै मुख्य समस्या हो । जबसम्म हामी जस्ता सगरमाथामा खेल्न सक्ने दक्ष र तालिम प्राप्त मानिसहरुको उचित मान सम्मान हुँदैन तबसम्म धेरै गाह्रो छ । अरु सबै कुराले नेपाल ज्यादै सुन्दर छ । यहाँको राजनीति मात्रै बिग्रिएको हो । हरेक कुरामा राजनीति घुसाउने प्रवृत्तिको अन्त्य भएमा नेपालमा सबै थोक छ । जीवनको पूरै बैंश देश सेवामा लगाएका शेर्पाहरु उनीहरुको आखिरी दिनसम्म नेपाल सरकारले हामीलाई मान सम्मान गर्छ भन्ने वातावरण भएमा सबै नेपालमा नै बस्न सक्छन् ।
Posted in अन्तर्वार्ता, मुख्य समाचार, समाचार | Tagged lapka Rendu Sherpa, नेपालका हिमाल जोगाउन सके मात्र विदेशी पर्यटकको ओइरो लाग्छ ः लाक्पा रेँडु शेर्पा ( महासचिव सगरमाथा आरोही संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय माउण्टेरिङ गाइड) | Leaveareply
काठमाडौँ – विगत २८ वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत प्रद्युमन पोखरेल मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन् । उनले वाणिज्य शास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका छन् । पोखरेलले सुरुमा नबिल बैंकमा म्यानेजरबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका हुन् । उनले नबिल बैंकमा...
काठमाडौँ – १५ जेठमा संसदमा बजेट सार्वजनिक भयो । त्यसपछि बजेट विषयमा टिकाटिप्पणी र समर्थन गर्नेहरुको आ–आफनै लाइन लाग्यो । धेरैले ‘फोटोकपी’ बजेट भन्दै वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट विगतकै ढाँचामा आएको धारणा सार्वजनिक गरे । केही पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले त जनतामुखी बजेट नआएको भन्दै...
ओली सरकारले ठुला जलविद्युत आयोजना बनाउन ध्यान दिनुपर्छ : सूर्यनाथ बास्तोला
नेपालले ठूलो राजनैतिक संघर्षपश्चात जनप्रतिनिधिहरुले अग्रगामी संविधान निर्माण गरी लागु गरी स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया पुरा गर्न लागेको छ । अब जनचाहना अनुरुपको देशमा आर्थिक विकास भएर सबै नेपाली जनताको उन्नति हुनेछ भन्ने जनतामा आशा उत्साह दृढ हुँदै...
भोलिदेखि हुन लागेको ‘स्टडी इन अष्ट्रेलिया’ शैक्षिक मेलामा विद्यार्थीका लागि के कति उपयोगी ?
काठमाडौं – अष्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थीहरुको रुचीलाई ध्यानमा राखी एजुकेशन पार्कले ‘स्टडी इन अष्ट्रेलिया शैक्षिक मेला २०७४’ आयोजना गर्ने भएको छ । यो मेला विद्यार्थीहरुका लागि के कति उपयोगी छ ? हामीले एजुकेशन पार्कका कार्यकारी निर्देशक विराज पाण्डेसंग कुराकानी गरेको छौ ।...